प्रदेश १ Archives – Page4of 32 – Samacharpati Samacharpati प्रदेश १ Archives – Page4of 32 – Samacharpati
मोरङ, २४ साउन । पथरी शनिस्चरेबाट संचालित गरीमा अनलाइन टेलिभिजनले सिल्भर इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरेको अनलाइन बक्तृत्वकला प्रतियोगिता २०२० मा १४ जना प्रतिस्प्रधीहरुलाई पछि पार्दै लेटाङ नगरपालिका ,मोरङकी गरिमा अधिकारी प्रथम हुन सफल भएकी छिन् । ”जातीय विभेद र नेपाली समाज” शिर्षकमा आफ्नो कुराहरु भिडियो रेकर्ड गरि पठाउनु पर्ने उक्त प्रतियोगितामा युट्युब भ्युअर्ससंगै निर्णायकहरुको पनि […]
झापामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु
दमक, २३ साउन । जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट झापाको कमल गाउँपालिकामा गए राति एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्युहुनेमा कमल गाउँपालिका वडा नं ५ स्थित टुक्रेका ५८ वर्षीय रोहित रेग्मी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी निरीक्षक भवनबाबु खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गए राति करिब २ बजेतिर नजिकैको रतुवा माईवृक्षरोपण आयोजनाको जङ्गलबाट आएको […]
सुनसरी, १८ साउन । धरानमा आज ९ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । संक्रमित फेला पर्नेमा धरान–१३ बस्ने कोरोना संक्रमित युवा काम गरेको धरान ८ तीनकुनेस्थित धरान औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमा कार्यरत ५ जना र एन्फा क्वारेनटाइन बसेका ४ जना रहेका छन् । धरान औद्योगिक क्षेत्रको प्रिति भल्व उद्योगमा काम गर्ने २ जना कर्मचारीका परिवारमा […]
वरिष्ठ गायक दिप श्रेष्ठ द्वारा स्टेट ! सिङ्गिङ आइडलका विजेताहरूलाई पुरस्कार वितरण
धरान, १५ साउन । रेडमुन इन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश नं १ स्तरीय गायन प्रतियोगिता स्टेट १ सिङगिङ आइडल २०७६ पहिलो संस्करण का विजेताहरूलाई आज बुधबार धरानस्थित ज्वाई खानाको हलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार वितरण गरिएको छ । प्रतियोगिताकी विजेता झापाकी जस्मिन बराललाई कुमार एण्ड सन्स अटो प्रा. लि. धरानको भेष्पा एण्ड […]
सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च, ५६ मध्ये ३२ वटा ढोका मात्रै खोलिदियो भारतले
सुनसरी, १४ साउन । आज बिहान सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ । सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेर प्रतिसेकेण्ड २ लाख ५ हजार ६ सय ७५ क्युसेक पुगे पछि ५६ मध्ये ३२ ढोका खोलिएको बताइएको छ । पानीको बहाव उच्च हुँदा समेत भारतले सप्तकोशी ब्यारेजका ५६ मध्ये ३२ वटा मात्र ढोका खोलेको हो । सप्तकोशीमा पानीको […]
धरानमा तरकारी बजारमाआगलागी, ११ वटाभन्दा बढी पसल जलेर नष्ट
इनरुवा, १२ साउन । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–३ स्थित तरकारी बजारमा आज बिहान आगलागी भएको छ । आगलागीमा परेर ११ वटाभन्दा बढी पसल जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । बजारको अघिल्लो भागमा रहेको कस्मेटिक र फलफूल पसल जलेर नष्ट भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको बारुणयन्त्रण र स्थानीयवासीले आगलागी नियन्त्रणमा लिएको र क्षतिको विवरण […]
झापामा कार्यरत १८ जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण
झापा, ११ साउन । झापामा कार्यरत १८ जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण भएको छ । पूर्वी सीमा काँकरभिट्टामा कार्यरत अधिकांश सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, झापाका जीवन चौंलागाईँले जनाएका छन । उनका अनुसार सबै प्रहरीलाई थप उपचारका लागि बिराटनगर लगिएको छ । उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक ट्रेसिङ पनि सुरु गरिएको […]
फरक कन्सेप्टमा ‘टिकटक तिज क्विन’ भिडियो पठाउन आव्हान, फाईनलमा प्रितम आचार्य
ईटहरी, ११ साउन । महामारी स्वरुप लिदै विश्वब्यापी भएको कोरोना भाईरसका कारण जारी भएको लकडाउनले नेपाललाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्यो । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पुग्यो । यता मनोरञ्जन क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । नेपालमा लकडाउनको अन्त्य भएपनी मनोरञ्जनको दुनियाँ भने पुरानो हिसाबले चल्न सकेको छैन । यस्तै पेरिफेरीमा अनलाईन […]
प्रदेश नं. १ प्रहरी कार्यालयका थप चार जना प्रहरीमा देखियाे काेराेना
काठमाडौं, ८ साउन ।आज फेरी प्रदेश नं. १ प्रहरी कार्यालयका थप चार जना प्रहरी अधिकारीमा कोरोना देखिएको छ ।बुधबार एक जना प्रहरी अधिकृतमा कोरोना पुष्टि भएकोमा आज फेरी ४ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका हुन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका अनुसार ११ जनामा गरिएको कोराना परिक्षणमा ४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । आज १५० […]
विरगञ्जमा एक जना बन्दी महिलाको मृत्यु
काठमाडौं, १ साउन । विरगञ्जको कारागारमा रहेकी एक जना बन्दी महिलाको मृत्यु भएको छ । कारागार प्रसाशनका अनुसार कारागारमा बन्दी जीवन विताइरहेकी एक महिलाको मृत्यु भएको हो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज–१५ घर भएकी ४९ वर्षीया कान्तिह भन्ने सविला खातुन रहेको प्रसाशनले जनाएको छ । उनको नारायणी अस्पतालमा उपचारको […]